Umbuzo izindiza zakudala
unyaka 1 10 edlule #570 by harrislarry1946
Sanibonani ................. wake wacabanga ngokwenza DC8 thwebula ??
unyaka 1 10 edlule #571 by Gh0stRider203
manje ukuthi kungaba mnandi. Kukhona izinto ezimbalwa ngaphandle lapho, kokubili freeware futhi payware kodwa yeah eyodwa kusuka Rikoooo Kungaba mnandi
unyaka 1 10 edlule #573 by harrislarry1946
Kungaba kuhle ikakhulukazi uma sasenziwa umsakazo ukuthi umsebenzi.
Ngenza eziningi ezindizayo yami FS2004 ezimweni IFR athande ukugubha okufushane 757 kodwa
awukwazi ukuhlela umsakazo ekhaya e phezu vor noma ILS ..... lottta ezinhle owenza.
Uma benza DC8 kuyoba mnandi ukuba version sisalokhu.
unyaka 1 10 edlule #578 by Gh0stRider203
Ngivame ukwenza eside hola yizimpahla ngakho mina nje IFR ku Take-off / lokubikezela UMA NGITHATHA kufanele. Anginayo esanele sokuhlala phansi i ATC qapha. Ingasaphathwa ezinye izindiza zami sikufeze ubusuku futhi mina Kinda ukujabulela le nto eyaziwa ngokuthi ukulala manje bese lol
Isikhathi ukudala page: 0.265 imizuzwana